Yusuf Garad oo ka hadlay maxaabiis dalka lagu soo celinayo | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Yusuf Garad oo ka hadlay maxaabiis dalka lagu soo celinayo
Yusuf Garad oo ka hadlay maxaabiis dalka lagu soo celinayo
Wasiirka arrimaha dibadda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyay dhalinyaro muwaadiniin Soomaali ah oo muddo ku xirnaa dalka Hindiya oo dib dalka loogu soo celinayo.
Dadaalka Dowladda Soomaaliya ay ugu jirto sidii loo soo deyn lahaa maxaabiis badan oo Soomaaliya uga xiran xabsiyo kuyaal daafaha caalamka ayaa ka mid ah talaabooyinkii ay Dowladdu qaaday, iyadoo ay soconayaan qorshayaal kale.
“Dhawaan waxaan heshiis la soo saxiixanay madaxda dalka India kaasi oo ku saabsan sidii loo sii deyn lahaa maxaabiista xabsiyada dalkaasi kujirat, waana la soo deynayaan, sidoo kale waxaan maamulka Jasiirada Seyshells aan madaxdeeda kala hadalnay sidii xoriyadooda loo siin lahaa maxaabiis Soomaaliyeed oo kujirta xabsiyada dalkaasi xukunkoodina ay Soomaaliya ku dhameystaan”, Ayuu yiri Yuusf Wasiir Garad Cumar.
Waxaa uu sheegey Wasiirku in horumar ballaaran laga sameeyey dhanka siyaasadda arrimaha dibadda oo uu ku tilmamay mid ku dhisan qunyer socod iyo wax wada qabsi iskaashi ku yimaada.
Mar uu soo hadal qaaday wadamada deriska la ah Soomaaliya ayaa waxaa uu sheegey wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya in xiriirka kala dhexeeya wadamadaasi uu yahay mid sii xoogaysanaya, taasi oo keentey in Dowladda Itoobiya ay Dowladda Soomaaliya ku soo wareejiso maxaabiis farabadan.
Mudane Yuusuf Garad ayaa xusey in wadadamad Liibiya iyo Yeman ay dad Soomaaliyeed dhibaatooyin ay kala kulmaan, isagoo xusay in Liibiya ay adagtahay meelaha qaar maadaama ay gacanta ku hayan kooxo falaago ah, balse ay sameyndoonaan dadaal kasta oo muwaadiniinta Soomaaliyeed bad baado u ah.
“Dowladda Soomaaliya waxay ku guuleystay in hay’ado caalami ah la kaashato sidii loo aasi lahaa meydadka muwaadiniintii Soomaaliyeed oo dhawaan lagu dilay dalkaasi Yeman, maadaam goobahaasi ay gacanta ku hayeen kooxaha mucaaradka”, Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
Previous articleWeerar is qarxin oo ka dhacay gudaha Xabsiga Dhexe ee Muqdisho
Next articleAl-Shabaab oo mar kale weerar ku qaaday Saldhigga Mukhtaar Roobow ee Gobolka Bakool